Nehemiya 3 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Motu Mutauro Wemasaini WekuJamaica Mutauro Wemasaini wechiBelgian French Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFlemish Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wechiSwiss German Mutauro Wemasaini wokuAlbania Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuIreland Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuMyanmar Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSlovenia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Navajo Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pennsylvania German Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Roman) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zulu
Kuvakazve masvingo (1-32)
3 Mupristi mukuru Eriyashibhi+ nehama dzake vapristi, vakasimuka kuti vavake Gedhi reMakwai.+ Vakaritsvenesa,*+ vakamisa masuo aro; vakatsvenesa kusvika kuShongwe yeMeya,+ uye kunosvika kuShongwe yaHananeri.+ 2 Uye pamberi pacho paivakwa nevarume vekuJeriko;+ pamberi pacho pachivakwa naZakuri mwanakomana waImri. 3 Vanakomana vaHasena vakavaka Gedhi reHove;+ vakarivaka nematanda+ vakabva vaisa masuo aro, nezvihuri zvaro, nemazariro aro. 4 Uye pamberi pavo paigadzirwa naMeremoti+ mwanakomana waUrija mwanakomana waHakozi, pamberi pavo pachigadzirwa naMeshuramu+ mwanakomana waBherekiya mwanakomana waMeshezabheri, uye pamberi pavowo paigadzirwa naZadhoki mwanakomana waBhana. 5 Pamberi peava paigadzirwa nevaTekoa,+ asi varume vainge vakakurumbira pakati pavo havana kuda kuzvininipisa kuti vaitewo basa* ravanatenzi vavo. 6 Joyadha mwanakomana waPaseya naMeshuramu mwanakomana waBhesodheya vakagadzira Gedhi reGuta Rekare;+ vakarivaka nematanda vachibva vaisa masuo aro, nezvihuri zvaro, nemazariro aro. 7 Pamberi pavo pakagadzirwa naMeratiya muGibhiyoni+ naJadhoni muMeronoti, varume vekuGibhiyoni neMizpa+ vaiva pasi pagavhuna* wenharaunda yeMhiri kweRwizi.*+ 8 Pamberi pavo pakagadzirwa naUzieri mwanakomana waHahaya, mumwe wevagadziri vemidziyo yegoridhe, uye pamberi pake pakagadzirwa naHananiya mumwe wevanogadzira mafuta ekuzora;* uye vakawaridza matombo muJerusarema kusvika kuRusvingo Rwakafara.+ 9 Pamberi pavo pakagadzirwa naRefaya mwanakomana waHeri, muchinda wehafu yedunhu reJerusarema. 10 Jedhaya mwanakomana waHarumafi ndiye akagadzira pamberi pacho pakatarisana neimba yake, uye pamberi pake pakagadzirwa naHatushi mwanakomana waHashabhineya. 11 Marikija mwanakomana waHarimu+ naHashubhu mwanakomana waPahati-moabhi+ ndivo vakagadzira chimwe chikamu,* uyewo Shongwe yeOvheni.+ 12 Pamberi pavo pakagadzirwa naSharumu mwanakomana waHaroheshi, muchinda wehafu yedunhu reJerusarema, pamwe chete nevanasikana vake. 13 Hanuni nevagari vemuZanoa+ vakagadzira Gedhi rekuBani;+ vakarivaka vachibva vaisa masuo aro, nezvihuri zvaro, nemazariro aro, uye vakagadzira makubhiti 1 000* erusvingo rwacho kusvika kuGedhi reMirwi yeMadota.+ 14 Marikija mwanakomana waRekabhi, muchinda wedunhu reBheti-hakeremu+ akagadzira Gedhi reMirwi yeMadota; akarivaka akaisa masuo aro, nezvihuri zvaro, nemazariro aro. 15 Sharuni mwanakomana waKorihoze, muchinda wedunhu reMizpa+ akagadzira Gedhi reChitubu;+ akarivaka nekuriisa denga, akaisa masuo aro, nezvihuri zvaro, nemazariro aro, uyewo akagadzira rusvingo rweDziva+ reMugero weMvura pedyo neMunda waMambo+ achinosvika kuMatanho+ anodzika kubva kuGuta raDhavhidhi.+ 16 Aiteverwa naNehemiya mwanakomana waAzbhuki, muchinda wehafu yedunhu reBheti-zuri,+ uyo akagadzira kubva pamberi peNzvimbo yeMakuva yaDhavhidhi+ kunosvika kudziva+ rakanga ravakwa uye kunosvika kuImba yeVane Simba. 17 Aiteverwa nevaRevhi vaiti: Rehumu mwanakomana waBhani; pedyo naye paina Hashabhiya, muchinda wehafu yedunhu reKeira,+ uyo akavaka achimiririra dunhu rake. 18 Pamberi pake pakagadzirwa nehama dzavo: Bhavhai mwanakomana waHenadhadhi, muchinda wehafu yedunhu reKeira. 19 Ezeri mwanakomana waJeshua,+ muchinda weMizpa ndiye aigadzira pachikamu chaiva pamberi pacho chepakatarisana nemukwidza unoenda kuImba yeZvombo yepaChitsigiso cheRusvingo.+ 20 Aiteverwa naBharuki mwanakomana waZabhai+ uyo akagadzira chimwe chikamu achishingaira, kubva paChitsigiso cheRusvingo kusvika kusuo reimba yemupristi mukuru Eriyashibhi.+ 21 Aimutevera ndiMeremoti+ mwanakomana waUrija mwanakomana waHakozi uyo akagadzira chimwe chikamu, kubva pasuo reimba yaEriyashibhi kusvika kunogumira imba yaEriyashibhi. 22 Pamberi pacho pakagadzirwa nevapristi, varume vemudunhu reJodhani.*+ 23 Bhenjamini naHashubhu ndivo vakagadzira pamberi pacho pakatarisana neimba yavo. Azariya mwanakomana waMaaseya mwanakomana waAnaniya ndiye akagadzira pamberi pacho pedyo neimba yake. 24 Aiteverwa naBhinui mwanakomana waHenadhadhi uyo akagadzira chimwe chikamu, kubva paimba yaAzariya kusvika kuChitsigiso cheRusvingo+ uye kunobata kukona. 25 Aiteverwa naParari mwanakomana waUzayi uyo akagadzira pakatarisana neChitsigiso cheRusvingo neshongwe inobuda paImba yaMambo,+ iya yekumusoro iri paChivanze cheVarindi.+ Aiteverwa naPedhaya mwanakomana waParoshi.+ 26 Vashandi vepatemberi*+ avo vaigara muOferi+ vakagadzira kusvika pakatarisana neGedhi reMvura+ riri kumabvazuva uye kushongwe yakabudikira. 27 Vaiteverwa nevaTekoa+ avo vakagadzira chimwe chikamu, kubva pakatarisana neshongwe huru yakabudikira kusvika parusvingo rweOferi. 28 Vapristi vakagadzira pamusoro peGedhi reMabhiza,+ mumwe nemumwe pakatarisana neimba yake. 29 Vaiteverwa naZadhoki+ mwanakomana waImeri uyo akagadzira pakatarisana neimba yake. Pamberi pacho pakagadzirwa naShemaya mwanakomana waShekaniya, muchengeti weGedhi reKumabvazuva.+ 30 Aiteverwa naHananiya mwanakomana waSheremiya naHanuni mwanakomana wechi6 waZarafi avo vakagadzira chimwe chikamu. Aiteverwa naMeshuramu+ mwanakomana waBherekiya uyo akagadzira pakatarisana neimba yake huru. 31 Aiteverwa naMarikija, mumwe weboka revaigadzira midziyo yegoridhe, uyo akagadzira kusvika kuimba yevashandi vepatemberi*+ nevatengesi, pakatarisana neGedhi Rekuongororera uye kusvika kuimba yepamusoro pekona. 32 Vagadziri vemidziyo yegoridhe nevatengesi vakagadzira chikamu chiri pakati peimba yepamusoro pekona neGedhi reMakwai.+
^ Kana kuti “Vakarikumikidza.”
^ ChiHeb., “havana kuisa mitsipa yavo pabasa.”
^ ChiHeb., “vekuchigaro cheumambo chagavhuna.”
^ Kana kuti “weMhiri kwaYufratesi.”
^ Kana kuti “wevanogadzira zvinonhuhwirira.”
^ Kana kuti “vakagadzira chikamu chakayerwa.”
^ Mamita angasvika 445. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “vemudunhu repedyo.”
^ Kana kuti “yevaNetinimu.” ChiHeb., “vanhu vakapiwa,” kureva kuti vakapiwa sezvipo.